Shirkii Xalane oo laga deyrinayo | KEYDMEDIA ONLINE
Shirkii Xalane oo laga deyrinayo
Waxaa laga deyrinayaa xaaladda Shirkii xerada Xalane ee lagu waday inuu qabsoomo kaddib is-mari-waa ka dhex taagan madaxda uu wada-hadalku usocdo, iyadoo aan weli wax natiijo ah laga gaarin kulamadaasi.
MUQDISHO, Soomaaliya - Wadahadalladii looga gol lahaa in xal iyo natiijo wanaagsan looga gaaro arrimaha doorashooyinka Soomaaliya ayaa si caga-jiid ah uga socda gudaha hotel ku yaal xerada Xalane.
Wadahadallada hadda socda oo loogu gogol xaarayo kulan weynihii Teendhada Afisiyooni ee ay ku shiri lahaayeen madaxda dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah ayaa u muuqda min aan miro dhal fiican sameyn, waxaana qarka u saaran in uu bur buro shirkii afarta maalin uga socday madaxda maamul goboleedyada, iyada oo ay muuqatay in kulamadoodii ay lahaayeen ay intabadan ka war wareegsanayeen qodobada dhabta ah ee la isku hayay.
Shirar u muuqday in ay maaweelo yihiin ayaa ka soconayay mudadii afarta cisho ee la soo dhaafay Hotel -lada garoonka diyaaradaha ku dhex yaal ee ay dagan yihiin madaxwaynayaasha Puntland iyo Jubbaland, shanta madaxweyne dowlad goboleed inkastoo aysan iyaga nafsad ahaantood is haysan, haddana qolo waliba meel gaara ayey wax u waddaa, waxaana la sheegayaa in aysan isfahansanayn, waxaana taa sii dheer in ay cabashooyin ka dhagaysanayeen midawga musharixiinta iyo madaxda gobolada waqooyi!
Waxaa gabi ahaanba la isla meel dhigi waayay Ajandihii kulanka, madaxwaynayaasha Puntland iyo Jubbaland ayaa ku dhaggan shuruudihii hore, mana u muuqato in ay dabceen, dhanka kale saddexda madaxweyne ee dowlad goboleedyada ayaa iyagana markii ay shirka madaxda dowlad goboleedyada kasoo baxaan waxay shir kale la qaataan madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Farmaajo iyagoo la socodsiiya halka ay wax marayaan iyo meesha lakala taagan yahay, halkaasoo isagana uu taladiisa kaga biiriyo.
Ma muuqato koox ka dabacday aragtidii ay aaminsaneed marka laga reebo labada madaxweyne goboleed oo aqbalay hab maamuuska madaxwaynaha, iyaga oo aqbalay in Madaxwayne Farmaajo uu shir gudoomiyo.
Waxaa la isku mari la'yahay weli cidda sugaysa ammaanka goobta shirka, waxaa la isku raacay in heshiiskii 17 -kii Sebtember 2020 kii iyo is af-garadkii guddiga farsamada Baydhabo ku shiray Febaraayo la dhammeystiro.
Raiisul Wasaaraha xukuumadda xil gaarsiinta ah ee Maxamed Xuseen Rooble ayaa isna la filayaa in uu maanta shir la yeesho shanta madaxwayne ee dowlad goboleedyada, inkastoo miisaan sidaas u weyn aan laga filan karin, madaxweynayaasha shanta maamul goboleed ayaa ka siman in aan muddo kordhin loo sameen dowladda waqtigeedu dhammaaday.